नेप्से परिसूचकमा झिनो अंकको सुधार :: कमल नेपाल :: Setopati
नेप्से परिसूचकमा झिनो अंकको सुधार
सोमबार नेप्से परिसूचकमा झिनो अंकको सुधार देखिएको छ। ३. ६ अंकले बढेर नेप्से १५२३ अंकमा कायम भएको छ। यस दिन १६० कम्पनीको ८४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
यस दिन बिमा समूह सबैभन्दा धेरै ८१ अंकले बढेको छ। त्यस्तै उत्पादन ३०, होटल ३५, विकास बैंक ११, जलविद्युत ६ अंकले बढेका छन्। बैंकिङ १, अन्य १ र फाइनान्स ०. ६ अंकले घटेका छन्। यस दिन नविल बैंकको सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार भएको छ।
कम्पनीको भोलि बुक क्लोज मिति भएकाले कारोबार बढेको हो। नविलले ३० प्रतिशत बोनस र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिँदैछ। आजसम्म सेयर किनेकाले सो लाभांशको हकदार रहनेछन्।
नविलको साधारणतर्फको १० करोड २८ लाखको कारोबार भयो भने संस्थापकतर्फको ६ करोड ६६ लाखको कारोबार भयो। नेपाल बैंकको ४ करोड ५४ लाखको सेयर किनबेच भयो।
यस दिन एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत नाफा कमाए। सूर्योदय लघुवित्तको ७. ९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। छ्याङ्दी हाइड्रोको मूल्य ६ प्रतिशतले घटेको छ। जनरल फाइनान्स र वमी माइक्रोको मूल्य ४ प्रतिशत बढीले घटेको छ। वमी माइक्रोले २० प्रतिशत बोनस र सोको कर प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम दिने भएको छ।
त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्टका लगानीकर्तालाई कम्पनीले ३० प्रतिशत बोनस र सोको कर प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम लाभांशस्वरुप दिने भएको छ। समता माइक्रोफाइनान्सले बोनस २० प्रतिशत र नगद लाभांश ११. ५ प्रतिशत दिने भएको छ। सिद्धार्थ बैंकको हकप्रद सेयर बजारमा सूचीकृत भएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २६, २०७४, ०३:१८:२५